CAB Qalabka Dayactirka. Hagaaji Musuqmaasuqa CAB Faylasha.
DataNumen CAB Repair waa ugu fiican CAB qalab kabashada adduunka. Waxay hagaajin kartaa musuqmaasuqa CAB kaydso oo dib u soo cesho inta ugu badan ee xogtaada intii suurtagal ah, taas oo yareyneysa luminta musuqmaasuqa faylka.
4.90 / 5 (laga bilaabo 1,646 cod)
maxaad DataNumen CAB Repair?
Barnaamijkiinu wuxuu umuuqday inuu sifiican ushaqeynayo madaama aan awooday inaan galo feylasha
daaqadaha sahamisa ama barnaamijka keydka.
Mar labaad, waad ku mahadsan tahay adiga
Mar labaad, waad ku mahadsan tahay kaalmada aad ka heshay barnaamijka waana sameyn doonaa
ha ka waaban inaad ku talisid.
Noocyada Muhiimka ah ee DataNumen CAB Repair v2.4
Taageero si loo saxo dhammaan noocyada Microsoft cabfaylasha
Taageero lagu dayactirayo CAB faylasha lagu cadaadiyey MSZIP, LZX iyo hababka Quantum.
Taageero lagu dayactirayo CAB faylasha ku jira warbaahinta khaldan, sida diskiga diskiga, Zip saxannada, CDROM-yada, iwm.
Taageero si loo dayactiro qayb ka mid ah CAB files.
Bixi dabagalka 'EXE' oo soo saar faylka SFX markii loo baahdo.
Taageero si loo helo oo loo xusho CAB faylasha lagu hagaajinayo kombiyuutarka macmiilka.
Ku dhexjiray qolofka Windows, markaa waxaad ku hagaajin kartaa feyl leh macnaha guud (guji midig) menu ee Windows Explorer si fudud.
Taageerada xariiqda taliska (DOS degdeg ah) xuduudaha.
Isticmaalka DataNumen CAB Repair inuu ka soo kabsado MS CabInet Archives
Marka aad Microsoft cabkeydka macluumaadka (.CAB faylasha) way waxyeeloobeen ama musuqmaasuqeen oo si caadi ah uma furi kartid, waad isticmaali kartaa DataNumen CAB Repair si loo baaro.CAB faylasha iyo soo kabsadaan xogta faylasha sida ugu macquulsan.
Fiiro gaar ah: Kahor intaadan soo ceshan wixii dhaawac ama musuqmaasuq ah CAB faylasha leh DataNumen CAB Repair, fadlan xir wixii barnaamijyo kale ah ee wax ka beddeli kara CAB gudbiso.
Xullo waxyeelada ama musuqmaasuqa CAB faylka la dayactirayo:
Waad ku dari kartaa CAB si toos ah filename ama guji
badhanka si aad u hesho CAB keydka lagu hagaajinayo kombiyuutarka deegaanka.
Marka la eego, DataNumen CAB Repair badbaadin doonaa go'an CAB fayl u gal fayl cusub oo lagu magacaabo xxxx_fixed.cab, halka xxxx uu yahay magaca isha CAB faylka. Tusaale ahaan, il ahaan CAB faylka Waxyeellocab , Magaca asalka ah ee faylka go'an waa la dhaawici doonaa_fixed.cab. Haddii aad rabto inaad isticmaasho magac kale, markaa fadlan dooro ama u dhig si waafaqsan:
badhanka si aad u caleenta u xulato feylka go'an.
batoonka, iyo DataNumen CAB Repair doonaa start iskaanka iyo hagaajinta isha CAB faylka. Bar horumarka
waxay muujin doontaa horumarka dayactirka.
Nidaamka dayactirka ka dib, haddii isha laga helo CAB faylka si guul leh ayaa loo dayactiri karaa, waxaad arki doontaa sanduuqa farriinta sidan oo kale:
Hadda waxaad furi kartaa go'an CAB fayl la WinZip, GuulRAR ama codsiyada kale ee taageera CAB files.
DataNumen CAB Repair 2.4 waxaa la sii daayay Diseembar 21, 2020
DataNumen CAB Repair 2.2 waxaa la sii daayay Nofeembar 5th, 2020
DataNumen CAB Repair 2.1 waxaa la sii daayay Janaayo 23th, 2019
Taageer Windows 8.1 iyo 10.
DataNumen CAB Repair 2.0 waxaa la sii daayay Nofeembar 9, 2013
Taageer Windows 7 iyo 8.
Diiwaan geli qaybta soo kabashada xogta, oo ay ku jiraan qalabka soo kabashada ee musuqmaasuqa Zip iyo diiwaannada SFX, RAR kaydka, Unix TAR kaydka, iyo Microsoft CAB diiwaanada
Dayactir iyo soo kabashada Unix musuqmaasuq ah TAR diiwaanada
Dayactir iyo soo kabashada musuqmaasuq Zip iyo faylasha is-soo-saarista (SFX).
Dayactir iyo soo kabashada kaydinta Microsoft ee musuqmaasuqa ah (BKF) faylasha